Fiarahabana BRUCE niverina avy any Kambôdza!
Miaraka amin'ny toe-javatra areti-mifindra mafy ao an-trano sy any ivelany, mba hamenoana ny fametrahana sy ny fampiofanana ny kaomandin'ny rafitra fitantanana lakilen'ny mpanjifa kambodziana. BRUCE, injeniera teknika miadidy ny LANDWELL, dia nanapa-kevitra ny ho any Kambodza hamaha ny olana aorian'ny fivarotana ho an'ny JIN BE ...Hamaky bebe kokoa »
Ny famokarana marani-tsaina an'i Sina ary ny zava-bita lehibe kokoa! Kabinetra fanalahidy an-jatony maro no mankany Turkey
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ny valanaretina pnemonia vaovao tampoka dia nahatonga orinasa maro ho amin'ny famerenana asa sarotra sy miadana, izay nampihena ny hafainganan'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena. Ho an'i LANDWELL, na mafy toy inona aza, dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra hampiroboroboana ny R&D a ...Hamaky bebe kokoa »
Maninona ny lakileko no tsy afaka mamoha hidy?
Azafady mba jereo tsara ilay toerana voatondron'ny faribolana mena toy ny aseho eo amin'ilay sary. Ireo faritra roa volondavenona ireo dia mila esorina aloha. Ary avy eo dia mila esorina ny visy Amin'ity indray mitoraka ity dia azo sokafana miaraka amin'ny lakilanao ny hidiny. Fa maninona no natao tahaka izao? Voalohany o ...Hamaky bebe kokoa »
Kabinetra fitehirizana lehibe, Rafitra fitantanana boaty kely sy lakile, Kabinetra lakile azo mihidy, Ny boaty ho an'ny fanalahidy fanaraha-maso, Vata fanalahidy mihantona, Kabinetra fitantanana lehibe,